N’ihi Gịnị Ka I Ji Ejere Chineke Ozi?
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Disemba 15, 2000
GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Portuguese Romanian Setswana Shona Slovak Slovenian Sranantongo Swahili Ukrainian Urdu Zulu
Otu eze na-atụ egwu Chineke nyere nwa ya nwoke ndụmọdụ a n’otu oge, sị: “Mara Chineke nke nna gị, were obi zuru okè, werekwa mkpụrụ obi ọ na-atọ ụtọ, fee Ya ofufe.” (1 Ihe E Mere 28:9) N’ụzọ doro anya, Jehova chọrọ ka ndị ohu ya jiri obi ekele na-ejere ya ozi.
DỊ KA Ndịàmà Jehova, anyị na-ekweta ozugbo na mgbe mbụ a kọwaara anyị nkwa dị iche iche nke Bible, obi anyị jupụtara n’ekele. Kwa ụbọchị, anyị mụtara ihe ọhụrụ banyere nzube Chineke. Ka anyị na-amụtakwu banyere Jehova, otú ahụ ka ọchịchọ anyị nwere ‘iwere obi zuru okè, werekwa mkpụrụ obi ọ na-atọ ụtọ, fee Ya ofufe,’ na-esikwu ike.
Ọtụtụ ndị ghọrọ Ndịàmà Jehova na-anọgide na-eji ọṅụ dị ukwuu ejere Jehova ozi ná ndụ ha nile. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị Kraịst malitere n’ụzọ dị mma, ma ka oge na-aga, ha echefuo ihe ndị na-akwali anyị ijere Chineke ozi. Nke ahụ ò mewo gị? Ọ bụrụ na o mewo gị, obi ekoropụla gị. A pụrụ inwetaghachi ọṅụ furu efu. N’ụzọ dị aṅaa?
Gụkọọ Ngọzi Gị
Nke mbụ, tụgharịa uche ná ngọzi ndị ị na-enweta n’aka Chineke kwa ụbọchị. Chee echiche banyere onyinye ọma dị iche iche Jehova na-enye: ihe okike ya dị iche iche—nke na-eru mmadụ nile aka n’agbanyeghị ọkwá ha ma ọ bụ otú ha nweruru akụ̀ na ụba—nri na ihe ọṅụṅụ ndị o nyere site n’okike, ahụ ike i nwetụrụ, ihe ọmụma i nwere banyere eziokwu Bible, nakwa nke kasịnụ, onyinye o nyere Ọkpara ya. Ọnwụ ya megheere gị ụzọ iji akọ na uche dị ọcha na-ejere Chineke ozi. (Jọn 3:16; Jemes 1:17) Ka ị na-atụgharịkwu uche n’ịdị mma Chineke, otú ahụ ka ekele ị na-enwe n’ebe ọ nọ ga na-amụbakwu. Obi gị ga-akpalizi gị iji obi ekele na-ejere ya ozi n’ihi ihe nile o mewooro gị. Obi abụọ adịghị ya na ị ga-amaliteghachi inwe mmetụta dị ka ọbụ abụ ahụ bụ́ onye dere, sị: “Ọtụtụ ihe ka Gị onwe gị meworo, Jehova, bụ́ Chineke m, bụ́ oké ọrụ Gị nile, na echiche Gị nile n’ebe anyị nọ: a pụghị idoro Gị ha n’usoro; . . . ha karịrị ịgụ ọnụ.”—Abụ Ọma 40:5.
Ọ bụ Devid, bụ́ nwoke nwekwara nsogbu ná ndụ, dere okwu ndị a. Mgbe Devid bụ nwa okorobịa, o biri ihe ka ukwuu ná ndụ ya n’ịgba ọsọ ndụ ka ajọ Eze Sọl na ndị nche ya nọ na-achọgharị ya igbu ya. (1 Samuel 23:7, 8, 19-23) Devid nwekwara adịghị ike onwe onye ndị ọ lụsoro ọgụ. O kwetara nke a n’Abụ Ọma nke 40: “Ihe ọjọọ na-adịghị ọnụ ọgụgụ agbawo m gburugburu, ajọ omume m nile eruwo m ahụ, apụghịkwa m ịhụ ụzọ; ha karịrị agịrị isi nile nke isi m n’ụba.” (Abụ Ọma 40:12) Ee, Devid nwere ọtụtụ nsogbu, ma nsogbu ndị ahụ erikpughị ya kpam kpam. Ọ tụkwasịrị uche n’ụzọ ndị Jehova si na-agọzi ya n’agbanyeghị nsogbu ya, ọ chọpụtakwara na ngọzi ndị ahụ karịrị nnọọ ahụhụ ndị ọ na-ata.
Mgbe o yiri gị ka nsogbu onwe onye ma ọ bụ mmetụta nke ịbụ onye na-erughị eru ọ na-erikpu gị, ọ dị mma ka ị kwụsị ma gụkọọ ngọzi gị, dị ka Devid mere. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ekele i nwere maka ngọzi ndị dị otú ahụ kpaliri gị ịrara onwe gị nye Jehova; echiche ndị dị otú ahụ pụkwara inyere gị aka inwetaghachi ọṅụ ma nyere gị aka iji obi ekele na-ejere Chineke ozi.
Nzukọ Ọgbakọ Pụrụ Inye Aka
Tụkwasị n’ịtụgharị uche na nzuzo n’ịdị mma Jehova, ọ dị anyị mkpa iso ndị Kraịst ibe anyị na-akpakọrịta. Ọ bụ ihe agbamume isoro ndị ikom, ndị inyom, na ndị na-eto eto bụ́ ndị hụrụ Chineke n’anya, bụrụkwa ndị kpebisiri ike ijere ya ozi, na-ezukọ mgbe nile. Ihe nlereanya ha pụrụ ịkpali anyị iji mkpụrụ obi anyị dum na-arụ ọrụ n’ozi Jehova. Ọnụnọ anyị nọ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze pụkwara ịgba ha ume.
N’eziokwu, mgbe anyị lọtara n’ebe obibi anyị mgbe anyị rụsịrị ọrụ siri ike n’ụbọchị ma ọ bụ mgbe anyị nwere nkụda mmụọ n’ihi nsogbu ma ọ bụ adịghị ike ụfọdụ, o nwere ike ghara ịdịrị anyị mfe ichewe banyere ịga nzukọ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. N’oge ndị dị otú ahụ, anyị aghaghị iji aka siri ike chịkwaa onwe anyị, ‘na-etipụta ahụ anyị ọnyá,’ dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ka anyị wee nwee ike irube isi n’iwu nke isoro ndị Kraịst ibe anyị na-ezukọ.—1 Ndị Kọrint 9:26, 27; Ndị Hibru 10:23-25.
Ọ bụrụ na nke ahụ adị mkpa, ànyị kwesịrị ikwubi na anyị ahụghị Jehova n’anya n’ezie? Ọ dịghị ma ọlị. Ndị Kraịst tozuru okè n’oge gara aga bụ́ ndị a na-adịghị agbagha ịhụnanya ha nwere n’ebe Chineke nọ agbagha, aghaghị itinye mgbalị siri ike iji mee uche Chineke. (Luk 13:24) Pọl onyeozi bụ otu n’ime ndị Kraịst dị otú ahụ. Ọ kọwara mmetụta ya n’ezoghị ọnụ n’ụzọ dị otú a, sị: “Amatara m na ezi ihe adịghị ebi n’ime m, nke ahụ bụ, n’anụ ahụ m: n’ihi na ịchọ ihe ọma dị nso n’ebe aka m ga-eru, ma ịrụta ihe ọma adịghị nso n’ebe aka m ga-eru. N’ihi na ezi ihe nke m na-achọ ka m na-emeghị: kama ihe ọjọọ nke m na-achọghị, ihe ahụ ka m na-eme.” (Ndị Rom 7:18, 19) Ọ gwakwara ndị Kọrint, sị: “A sị na ana m ezisa ozi ọma, enweghị m ihe ịnya isi; n’ihi na mkpa na-akpa m . . . N’ihi na a sị na emee m ihe a ebe m na-achọ ime ya, enwere m ụgwọ ọrụ: ma ọ bụrụ na emee m ya mgbe m na-achọghị ime ya, e werewo ntụkwasị obi nye ọchịchị ezinụlọ n’aka m.”—1 Ndị Kọrint 9:16, 17.
Dị ka ọtụtụ n’ime anyị, Pọl nwere ọchịchọ mmehie bụ́ ndị na-egbochi ọchịchọ ya ime ihe ziri ezi. Otú ọ dị, ọ lụsosiri ọchịchọ ndị ahụ ọgụ ike, n’ihe kakwa ọtụtụ n’oge ndị ahụ, o nwere ihe ịga nke ọma. N’ezie, Pọl arụzughị nke a n’ike nke aka ya. O dere, sị: “Enwere m ike n’ihe nile n’ime Onye ahụ Nke na-eme m ka m dị ike.” (Ndị Filipaị 4:13) Jehova, bụ́ onye nyere Pọl ike, ga-enyekwa gị ike ime ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na ị rịọ ya maka enyemaka ya. (Ndị Filipaị 4:6, 7) Ya mere, “na-agbasi mgba ike n’ihi okwukwe ahụ,” Jehova ga-agọzikwa gị.—Jud 3.
Ọ dịghị gị mkpa ịgba mgba a nanị gị. N’ọgbakọ Ndịàmà Jehova, ndị Kraịst bụ́ ndị okenye tozuru okè, bụ́ ndị na-anọgidesi ike na ‘mgba nke okwukwe’ ahụ n’onwe ha, dị njikere inyere gị aka. Ọ bụrụ na ị gakwuru onye okenye maka enyemaka, ọ ga-agbalịsi ike ‘ịgụgụ’ gị. (1 Ndị Tesalọnaịka 5:14) Ihe mgbaru ọsọ ya ga-abụ ime ihe “[dị] ka ebe izonahụ ifufe, na ebe nzuzo ịpụ n’oké mmiri ozuzo.”—Aịsaịa 32:2.
“Chineke bụ ịhụnanya,” ọ chọkwara ka ndị ohu ya jiri ịhụnanya na-ejere ya ozi. (1 Jọn 4:8) Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka i mee ka ịhụnanya i nwere n’ebe Chineke nọ dịghachi ọkụ, mee ihe ndị kwesịrị ekwesị iji mee nke ahụ, dị ka e depụtara n’elu. Obi ga-adị gị ụtọ na i mere otú ahụ.
Omenala Krismas—Hà Bụ nke Ndị Kraịst?
Ozi Ọma nke Udo Erute n’Ala Ugwu Ugwu nke Chiapas
Nyere Ndị Ọzọ Aka Ijegharị n’Ụzọ Kwesịrị Jehova
Guzonụ Dị Ka Ndị Zuru Okè Ndị Kwezuworo Ihe Nile
Ndị A Kwaliri Ije Ozi
Ndepụta Ntụaka Isiokwu Dị Iche Iche Maka Ụlọ Nche 2000
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Disemba 15, 2000
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Disemba 15, 2000